Banaanbax maanta ka dhacay Muqdisho iyo mas'uuliyiin ka hadashay.
on September 17 2013 Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka dhacay banaanbax aad u balaaran oo uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada Yaaqshid ee gobalka Banaadir, kaas oo lagu taageerayay shirkii ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka.
Dadweyne badan oo isugu jira haween, caruur, dhalinyaro iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Yaaqshiid ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta isugu soo baxay, iyagoona ku dhawaaqayay ereyo ay kusoo dhaweeynayaan shirkaasi ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka.
Gudoomiyaha maamulka degmada Yaaqshiid ee dowladda Soomaaliya Muxuyidiin Xasan Jurus oo ka hadlay goobta uu banaanbaxa ka dhacaayay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay si aad usoo dhaweeynayaan shirkaasi ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka.
"Waxaa halkaan isugu soo baxay dad shacab ah oo aad u badan, kuwaas oo ka kala yimid dhamaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Yaaqshiid, waxaana ay ku muujiyaan taageerada ay u haayaan go�aanadii kasoo baxay shirkii ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka" Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha maamulka degmada Yaaqshid Muxuyidiin Xasan Jurus.
Si kastaba ha ahaataee, banaanbaxaan maanta ka dhacay degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli maalintii shalay uu magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay ka dhacay banaanbax aad u balaaran oo looga soo horjeedo shirkii ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka.
Xafiiska Warbaahinta Bulshoweyn.com ee Magaalada Muqdisho. Nagala Soo Xiriir:- info@bulshoweyn.com